Ogaden News Agency (ONA) – Sir laga helay Gumeysiga oo ku aadan Qurba Joogta- Tigreega, Mucaaradka Ethiopia iyo Eritreanka
Sir laga helay Gumeysiga oo ku aadan Qurba Joogta- Tigreega, Mucaaradka Ethiopia iyo Eritreanka
(Hoos ka fiiri waraaqaha sirta ah). Gumeysiga Ethiopia ayaa walwal badan ka qaba shacabka Tigreega ah ee ku nool qurbaha iyo guud ahaan mucaaradka Ethiopia ee ku nool qurbaha, iyo shacabka Eritriya ee ku nool daafaha dunida. Hadaba si taliska Ethiopia uu uga hortago dadka uu u arko inay halis ku yihiin siduu maamulka Kaligii Taliye Zenawi uga sii jiri lahaa Ethiopia, ayuu kaligii Taliye Zenawi soo mal maluuqay warqado uu u soo dirsaday safaaradaha oo uu rabo in Tiro koob lagu sameeyo dadka Tigreega ah ee ku nool qurbaha khaasatan Ree galbeedka oo la baadho dhaq dhaqaaqooda, shaqada ay qabtaan, meesha ay seexdaan iyo waxa ay ku soo toosaan, cida ay la hadlaan iyo noloshooda oo dhan. Waxaana laga cabsi qabaa in shacabka Tigree haduu ku kaco kaligi taliye Zenawi, iyadoo ay qawmiyadda Tigreega laftooda dhibaato ka tirsanayaan maamulka Zinawi, ay noqon karaan meesha ugu dhib yar ee laga wareemi karo taliskiisa .
Sidoo kale maamulka Kaligii taliye Zenawi ayaa waxuu rabaa innuu tiro koob ku sameyo dhamaanba dadka Taliska Ethiopia ka soo horjeeda ee leh Jaaliyadaha sida Ogadeniya, Oromada, Xabashida iyo dhamaan qowmiyadaha Ethiopia si loo helo tirada ay ku joogaan qurbaha. sidoo kale in la ogaado mucaarad nimadoodu waxay tahay, xidhiidhka ay la leeyihiin dowladaha ay la noolyihiin iyo awoodooda mucaaradnimo intay le’egtahay. Kaligii taliye Zenawi ayaa xaqiiqsaday hadda inuu meel uu ka galo waayay mucaaradka Ethiopia oo canbareyn iyo fadeexadiisa geed kasta la hoos fadhiya.
Sidoo kale waxa taliska TPLF uu qorsheystay innuu tiro koobo dadka ree Eritrea ee qurbaha ku nool oo ah dad isku xidhan oo wadankooda Eritrea taagero xoogan u haya. Kaligi taliye Zenawi ayaa dhibaato badan ka tirsanaya shacabka Eritrea ee ku nool qurbaha kuwaas oo heysta dhalasho oo leh aqoon heersare ah. Waxayna fagaaraha caalamka dagaal adag ugu jiraan sidii dhulka Eritrea ee Ethiopia heysato ay ku soo ceshan lahaayeen.
Hadaba kaligi taliye Zenawi oo kolba dhan wax ka daya ayaa amakaag uu ku dhacay, isagoo bilaabay innuu jaajusnimo ku shaqeysto. Dadka ku xeel dheer arrimahan ayaa noo sheegay, in safaradaha Ethiopia iyo Taliska TPLF uu mugdi badan soo dhexgalay, iyada oo hadda dadka ku xidhan safaaradaha ee la moodayay inay u shaqeyaan gumeysiga laga shakiyay.
Waxaa tirakoobka gumeysigu ku jira in la ogaado dadka EPRDF ee safaradaha ku xidhan shaqada ay qabtaan waxa ay tahay, sidoo kale dadka jawaasiista u ah ayaa warbixintan lagu sheegay inay yihiin laba wajiile, wararka labada dhanba u qaada.
Waxaa hadda laga bilaabo safaaradaha Ethiopia ay baadhi doonaan qofkasta oo safaarada ku xidhan, iyaga oo laga qori doono warbixin ka hadlaysa shaqadiisa, jamacadiisa, lacagaha uu helo siduu u isticmaalo, xawaalada uu ku dirsado iwm.
Xogtan uu gumeysigu soo qoray oo siro badan ay ku jirto ayaa waxaa ay tahay isku day kale, kadib markii taliskan uu ku fashilmay mashruucii biyo xidheenka ee la doonayay in Qurbajoogta looga qaado maal farabadan. Ilaa hadana waxaa mashruuca biyo xidheenka Ethiopia ay heshay lacagtisi 10% lacagtii ku bixi laheyd.